Ukunconzuleka kancane kancane kwase-Bitou | Scrolla Izindaba
Ukunconzuleka kancane kancane kwase-Bitou
Indawo yase-Bitou ijwayelekile komasipala abaningi base Ningizimu Afrika, kuhlala abacebile, eceleni kwabampofu kakhulu.
Umasipala wase-Bitou usebenzisa imali eningi kakhulu kubo kunezakhamuzi zabo.
Umehluko ukuthi i-Plettenberg Bay, okuyidolobha elikhulu futhi eliyikhaya labaningi abangosomabhizinisi eNingizimu Afrika, kanye nasebathatha umhlalaphansi.
Ngakho-ke kukhona abaselisa nabasifazane abanesikhathi nesipiliyoni sokuphenya ngohulumeni wendawo.
Inhlangano yase-Plettenberg Bay Ratepayers Association ibheke umasipala ngeso lokhozi. Igcizelele kakhulu ukuthi umbiko omkhulu wokubusa kukahulumeni wase-Western Cape uvezwe obala.
Abakhokhi bemali sebeke babheka isabelomali sakamuva esikhishwe ngumasipala, abathi banezinhlelo zokusebenzisa imali kanje:
*R800 000 wamalambu womkhosi wokugubha ukhisimusi eminyakeni emithathu eyedlule
*U-R130 000 wehhovisi leMeya (ifenisha kanye nempahla yehhovisi)
*Izigidi eziyi-R7 ekuthuthukisweni kwenkundla yebhola lezinyawo, kufaka phakathi uR1,9 wezigidi wokulungisa indawo yokuhlala impahla/ izimpahla.
Eminyakeni emine eyedlule, umasipala wase-Bitou ushintshe izimenenja zikamasipala amahlandla ali-11.
Umbiko kahulumeni wase-Western Cape ongamakhasi angama-164 ugcwele izinsolo zenkohlakalo, ukusetshenziswa budedengu bemali nokungaziphathi kahle.
Okubhekelela uhlelo yemali yesibonelelo i-“Grant-in-Aid”, lapho izinkampani zazikhokhelwa ukwenza umsebenzi womphakathi.
IMeya uLobese usolwa ngokukhetha izinkampani ngokungahambisani nemithetho, nokuthi lezi zinkampani zikhokhele iqembu lakhe lezepolitiki.
“Kubukeka sengathi uPeter Lobese wasebenzisa kabi isikhundla sakhe njengeMeya ukuqinisa iqembu lakhe lezepolitiki i-AUF”, kusho umbiko.
“Izimali ze-Grant-in-Aid zanikezwa amalungu omphakathi ngaphandle kokuba semthethweni kwezinhlangano ezizimele ezingenzi nzuzo.”
Ihhovisi lemeya linqabile ukuba liphawule ngezinsolo ezivezwe umbiko wocwaningo.